Taariikhda My Butros » Caddayn aad la Online Dating Profile Photo
Last updated: Jan. 24 2020 | 3 min akhri
Haddii aad u malaynayso in aad doorato mid ah sawir inay la xidhiidhaaan aad online profile ma jabna, qabaa mar kale. Xaqiiqdu waxay tahay sawirka profile waa mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee la go'aaminayo haddii dater internetka ah siin doonaa profile fiirin labaad. Oo haddii aad ku fekereyso, oon Mushrikiin sawir aad la profile, ma filan si aad u hesho jawaabaha kasta. Daters online badan oo sheeg baaritaan iyaga oo shukaansi bog internet oo ay kaliya ku tusto jawaabta dadka la sawiro. The profile shukaansi sawir online waa qayb muhiim ah ka go'aaminta aad ku guulaystaan ​​dunida shukaansiga online.
Falcelin Your mindhicirka waxaa laga yaabaa in ay u saaray sawir ka ugu fiican ee aad qabto naftaada marka aad dooranayso sawirkaaga u online aad shukaansi profile. Waa la fahmi karo in aad rabto in aad ka naftaada eegto sida jiidasho sida ugu macquulsan online ka dib dhan, aad raadinayso xaq taariikhda a? Well, waxaa fikrad fiican oo uu ka soo xusho profile ah in uu yahay wax yar wakiil ka badan oo ku saabsan sida aad eeka, ma sida aad u rabto in aad u eegay.
Sida kor ku xusan, sawirka profile waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan in laga dhaadhiciyo nin ama naag si kale u Dhawaanina sida ciyaar ka iman kara online. Haddii aad sawirka kor u saaray in aanu si sax ah u taagan yihiin sidee baad ku fiirin (sawirkaaga waa dhowr sano jirka ah, aad u heshay 20 lbs tan iyo sawirkaaga loo qaaday, ama sawirkaaga la badalay si aad eegto soo jiidasho) taariikhda ciday ku heli doonaa fikrad qaldan oo ah sida aad eegto. Waxaad halis sare oo niyad jab aad taariikhda iyo horumarinta arrimaha kalsoonida xaq u off fiidmeerta marka aad la kulanto qof ahaan iyo eegi xoogaa yara duwan yahay isaga ama iyada ayaa la filaya.
Isla mar ahaantaa, hubi in sawirkaagu waa labada macquul ah oo wanaagsan. Inkasta oo aanad rabin in la siiyo koobi ah aan sax ahayn oo ku saabsan sida aad u eeka, xasuuso, waxaad weli isku dayaysa inay hesho taariikhda a. Ha sawir in aad profile shukaansiga online waqtiga marka aad ahaayeen afar bilood dhaafto xiiro ama maalinta aad ilowday in aad saaray suurto-gal. Weydii saaxiib ama laba taas oo sawiro aad soo baxo tayada ugu wanaagsan ee aad halka weli la siiyo aragti dhab ah ee waxa aad eegto sida maalin wanaagsan.
Haddii aad fursad u dhigay ilaa sawiro badan naftaada, sidaa sameeyo. Wixii weyn ee aad profile photos waxay u badan tahay waxaa fiican in aad hesho madaxa iyo sholder shot fiican si aad profile daalacashada heli kartaa dareen wanaagsan oo waxa aad u eg. Laakiin, ka faa'idaystaan ​​fursad u photo badan ay u isticmaalaya sida fursad uu ugu muujiyo off qaar ka mid ah qaababka aad wax dheeraad ah u gaarka ah iyo dabeecadda qofka. Dooro sawiro muujinaya in aad madadaalo, qayb-qaadashada hawlaha dibadda, ama iska dhigaya in goobaha dabiiciga ah oo qurux badan.
Online Dating Profile Photo Talooyin dheeraad ah
– Ha saarin ilaa sawiro aad dadka kale la. Qofka daalacanaya aad profile ma ogaan karo taas oo qofka aad tahay iyo waxa laga yaabaa in ka badan soo jiita qofka iska dhigaya inaad la.
– Hubi in aad dhoola in sawirkaagu. Waxaad doonaysaa in aad siin ciyaar ka iman kara aragti ah in aad tahay qof ku faraxsan diyaar u ah inay biloowdo xidhiidh faraxsan oo wanaagsan.
– Ha sawiro muujinaya macluumaad shakhsiyeed oo ku saabsan shaqo ama boos ku nool aad. Haddii aad sawir aad ee hor taagan gurigaaga la cinwaanka muujinaya calaamad in dhismaha xafiiska, laga yaabaa in aad daaha macluumaad dheeraad ah si ay xubnaha shukaansiga online ka badan aad uu rabay inuu. Hayso sawirkaaga sida qarsoodi ah intii suurto gal ah.
– Maskaxda ku hay waxa aad rabto in aad muujiso in ay dadka kale marka aad dooranayso sawirkaaga. Ha saarin ilaa sawirada aad la cabbo ama wax cabbeen, biligleynaya kamarada, ama flipping shimbirta haddii aad raadinayso a xiriir jaceyl dhab ah.
Maxaa Ma rabtaa in Haweenka ay Man Eebaha?